December 2021 – Nyi Ma Lay
တိုက်လေယာဉ် တွေ မှာ အဲယားကွန်း ပါလား မပါဘူးလား …….
By Nyi Ma LayPosted on December 25, 2021
တိုက်လေယာ ဉ်မှာအဲယား ကွန်းပါမပါ..ခေ တ်မှီဂျက် တိုက်လေယာဉ်အ များစု မှာအဲယားကွန်း ပါလေ့ရှိပါ တယ်။အသံထ က်မြန်တဲ့ဂျ က်တိုက်ေ လယာဉ်တွေ မှာဆိုရင်မပါမဖြစ် ပါပါတယ်။ အသံထက်မြန်တဲ့ ဂျက်တိုက်လေယာ ဉ်ပိုင်းလော့ ဟာ pressuresuit, Gsuit, […]
ကိုယ့်နိုင်ငံကို တင်သွင်းလာ ကတည်းက ကားတွေမှာ ပါလာတဲ့ ဂျပန်စာတွေ ကိုမခွာပဲ ဂုဏ်ယူစွာကပ်ထားသူတွေ သတိထားစရာ
By Nyi Ma LayPosted on December 22, 2021
ဂျပန်ေ တွ ကျိုက်ထီးရိုး လိုက်ပို ့တော့ ကားလေးေ တွ အပေ ါ်တက်လို့မရဘူး လမ်းအေြ ခအနေနဲ့safety ကြောင့် ကားကြီးေ တွနဲ့ တောင်ပေါ်တက်ရ တာပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ကားလက်မှ […]
ပိုလန်တပ်မတော် မှာ ကိုယ်ပိုင် နံပါတ်၊ ကိုယ်ပိုင်ရာထူးနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲဝင် ဝက်ဝံလေး အကြောင်း
By Nyi Ma LayPosted on December 18, 2021
စစ်ပွဲများ ၏ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာကြည့်လျှင် ဝက်ဝံ တစ်ကော င်အကြောင်း သိရှိလာပေလိမ့်မည်။ ဒုတိယက မ္ဘာစစ်အတွ င်း ပို လန်တပ် မတော်တွင် ဝက်ဝံတ စ်ကောင်သည် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ Voytek အမည်ရှိ ဝက်ဝံသည် […]
(၁၂) လပိုင်း ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာ အထူးဟောစာတမ်း ကြာသပတေး သားသမီးများ အတွက်
By Nyi Ma LayPosted on December 17, 2021
ကြာသ ပတေး သားသမီးများ အတွက် (၁၂) လပိုင်း ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာ အထူးဟောစာတမ် လူလိမ်ခံ ရလိမ့်မယ်။ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူေ တွရဲ့သစ္စာဖော က်ခြင်းခံရမ ည်။အောက် လက်ငယ်သားတွေကို အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စများ မျက်နှာလွှဲ မခိုင်းသင့်ပါ။ […]
2022 တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း… စနေ သားသမီးများအတွက်
By Nyi Ma LayPosted on December 11, 2021
စနေသား သမီးများ တို့သည် ကုသိုလ်ဒါနများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ သွားလာရကိန်းရှိသည်။ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွ က်ပေးရခြင်းများ ရှိမည်။ မိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှိသလောက် အကျိူးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းမည်။ ပေါ်ပေါက်လာသော အခွင့်အရေးကို လက်တွေ့အသုံးချ၍ […]
ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော ကုန်းဘောင်ခေတ် အမျိုးသမီးစာဆို “အနောက်နန်းမတော် မမြကလေး” အကြောင်း
ကုန်းဘော င်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးစာ ဆို အများ အပြားေ ပါ်ထွန်းခဲ့ရာ “အနောက်န န်းမမြကလေး”၊ “အေ နာက်နန်းမတော် မမြကလေး’ဟူ၍ ဝိသေသြ ပုရသော မမြကလေး (၁၁၇၁-၁၂ဝရ) မှာ ထင်ရှားေ သာ စာဆိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ […]
ထူးထူးခြားခြား အရပ်3ပေ6လက်မသာ ရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကျော် အဝှာမင်းသား
အာရှ တိုက်မှာ အဝှာ ဇာတ် ကားအများ ဆုံးထုတ် လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတည်ရှိရာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အဝှာဇာတ်ကား သရုပ် ဆောင်တွေဟာ ဝင်ငွေခိုင် မာကြပြီး၊ လူနေမှုအ ဆင့်အ တန်းလည်း မြင့်မားကြတ ယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ကညနက အသစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးတဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ကားနံပါတ်ပြား နံပါတ် အမှတ်အသားများ ….
By Nyi Ma LayPosted on December 10, 2021
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အတွင်းရှိ မြို့နယ်အလိုက် Region Code & Number စာရင်း (အဆိုပြု) ကချင်ပြည်နယ် (က) ပူတာအို (၁) ခေါင်လန်ဖူး KCN-1 (၂) ဆွမ်ပရာဘွမ် KCN-2 […]
ပြောင်းလဲမြင့်တက်သွားတဲ့ အင်တာနက် စျေးနှုန်းများနဲ့ စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့ “Mobile data အခက်အခဲကို ဘယ်လို​ကျော်လွှားကြမလဲ”
By Nyi Ma LayPosted on December 10, 2021 December 10, 2021
Mobile data ​တွေ ​ဈေးတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့ သတင်း​​တော့ အားလုံးသိပြီးကြပြီ ထင်ပါတယ်။ ဘာ​ကြောင့်ဆိုတာ​တော့ ကာယကံရှင် ကြင်စိုးတို့ပဲ သိမယ်ဆို​ပေမဲ့ မ​ပြေး​သော်ကန်ရာရှိ ဆိုသလို Digital Strike နဲ့ သတင်းစီးဆင်းမှု​တွေကို တားဆီးချင်လို့ လို့ပဲ မှတ်ယူရမှာ […]
အသီးအနှံဆိုင်တွေက ဝယ်ယူသူတွေကို လုံးဝမပြောပြတဲ့ အသီးရွေးနည်း လျှို့ဝှက်ချက်များ…
By Nyi Ma LayPosted on December 8, 2021
သစ်သီး ဆိုင်တွေက လုံးဝမပြောပြတဲ့ အသီးရွေးနည်း လျှို့ဝှက်ချက်များ… ပန်းသီးရွေးရင် အစင်းလိုင်း ပါတာ ရွေးပါ။ အပေါ်ရော အောက်ရော အချိုင့်နက်နက်လေးဖြစ်လေ ချိုလေပါ။ ငှက်ပျောသီး အပေါ်ရော အောက်ရော စိမ်းနေရင် မဝယ်ပါနဲ့။ သရက်သီး မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ […]